HTC na-ekwuwapụta ekwentị ndị ga-emelite gam akporo 9.0 achịcha | Gam akporosis
HTC na-ekpughe ekwentị izizi iji gosipụta gam akporo 9.0 achịcha
Edere Ferreno | | HTC, Gam akporo nsụgharị
Izu a ụdị ndị dị na mpaghara gam akporo na-enwe ọtụtụ ọrụ. Mgbe mbata nke gam akporo 9.0 achịcha, oge eruola ịmalite ịrụ ọrụ na mmelite ahụ. E nweelarị ụdị ndị kpughere ekwentị ndị ga-abụ ndị mbụ ga-enweta mmelite a. Adị ọhụrụ na-esonye na ndepụta a, n'ihi na HTC na-agwakwa anyị ụdị nke ga-abụ nke mbụ.
The Taiwanese emeputa a na-ifelata na ahịa, ọ bụ ezie na HTC's high-end bụ onye na-iburu n'uche mgbe niile. Modelsdị ndị a ga-abụ nke mbụ nke ụlọ ọrụ nwere Android 9.0 Pie n’ime ọnwa ole na ole.
N'oge ahụ, a na-enwerịrị ngụkọta nke ekwentị anọ. Companylọ ọrụ ahụ ekpughere ha na ozi na Twitter, na-ekwu naanị ụdị nke ga-abụ onye mbụ iji nweta mmelite a. Na nkebi, enweghi ọtụtụ ihe ịtụnanya na aha ha kpughere. Ekwentị họọrọ site na ụlọ ọrụ ahụ bụ:
U12 + HTC
U11 + HTC
HTC U11 ndụ (gam akporo Otu)
Ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịhụ na ha bụ ụdị ya dị elu, yana ekwentị dị na nso ya nke na-eji Android One dị ka sistemụ arụmọrụ. Ndị a bụ ekwentị ndị mbụ dị na katalọgụ ụlọ ọrụ iji nwee ike nweta mmelite ahụ na gam akporo 9.0 achịcha. Ihe ekpughebeghi bụ ụbọchị emelitere a ga-erute ekwentị. Agbanyeghi na okwesiri ime tupu njedebe nke afọ.
Mana anyị ga-echere ka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kpughere data ndị ọzọ. N'oge ahụ, anyị nwere aha anọ nke ekwentị ndị ga-enwe ike imelite gam akporo 9.0 Pie n'oge na-adịghị anya. Yabụ ndị ọrụ nwere ụdị ọ bụla n'ime ụdị a ga-ama na mmelite ahụ ga-adị n'oge na-adịghị anya. Anyị kwesịrị ichere ịmara ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » HTC na-ekpughe ekwentị izizi iji gosipụta gam akporo 9.0 achịcha
OPPO Find X Super Flash ga-ebido na August 17
Motorola ga na-akwadebe Moto Mod dịka Samsung DeX